February 26, 2020 NEWS 2
BADHAN(P-TIMES) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore oo katirsan baarlamaanka Puntland, kana soo jeeda gobalka Sanaag ayaa isagoo ka hadlaya magaalada Badhan kulan lagu qabtay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aayahooda dib uga tashadaan dadka degan gobalkaas, isagoo sheegay in la iibsaday dadka oo aysan waxba gacanta ugu jirin.
Xildhibaanka ayaa ka hadlayay dood ku wajahan xaggee u socdaa gobalka Sanaag, wuxuuna sheegay in gobalka iyo dadkiisaba la iibsaday oo dusha laga gatay, wuxuuna cadeeyey in aysan meelna uga jirin arrimaha Isbedelada nooc kasta oo ay yihiin.
Mr, Dhoore oo horey uga tirsanaa xildhibaanada mucaaradsan siyaasadda Madaxweynaha Puntland, balse dib uga biiray ayaa sheegaya in aysan cid wax u ogol dadka gobaladaas, mar kastana ay noqdaan kuwa lagu fushado danaha ay leeyihiin.
Xisbiyada laga wado Puntland ayuu sheegay in aysan waxba ka aheyn dhankooda oo ay wataan dad gaar ah oo kusifeeyey kuwa xukunka haysta, isagoo sheegay in isbedelada siyaasadda ee dalkana ay muuqdan oo ay tahay in horey loo dhaqaajiyo.
dhulbahante reer bari io warsangali inay maamul cusub samaystan baalo qaatay
sababto ah puntland xukunkeda waxa iska haysta 3reer marka 3daa nin inloo baneyo ayaa haboon
AWAL MAJEERTEN WAA IS HAYSTAY BALSE DANI DIBIRO WAYNE BAA KALA FURFURAY
Waxaan mooqata inay PL burbur ku socoto Dani&Doqonkii ka horeeyay ayaana sabab u ah.laakiin waxaa u maleenayaa Harti ina la guumaysto way u baahanyibiin si at u dareemaan gunnimo waxay tahay. Marka calanka SNM $USC dhulkooda khasab lagaga taago laga yaaba inay toosaan oo rag qayrkood wax la qaybsan karaa noqdaan.